तपाईंको पेटबाट विषाक्त पदार्थहरू फ्यालो गर्नको लागि सरल घरेलु उपचार! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
तपाईंको पेटबाट विषाक्त पदार्थहरू फ्यालो गर्नको लागि सरल घरेलु उपचार!
घर स्वास्थ्य पोषण पोषण ओआई-चन्दना राव द्वारा चन्दना राव अगस्त २०, २०१ on मा
के तपाईं कोही हुनुहुन्छ जो प्राय: खाँदै हुनुहुन्छ र / वा नियमित आधारमा फोहोर र प्रदूषणको चपेटामा हुनुहुन्छ? यदि हो भने, त्यसोभए तपाईंले सोचिरहनुपर्दछ कि सफा पेट कसरी पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईंले महसुस गर्नुभएमा तपाईंको पेट विषले भरिन सक्छ।
हामीले घनिष्ट गरेका सबै चीजहरू अन्ततः हाम्रो पेटमा पुग्दछन् र त्यसैले, पेट विषको भण्डार हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्न भने!
कसरी शरीरको गर्मी चिसो
हामीले खाने खाना, पेय पदार्थहरू हामी खान्छौं र हावामा पनि हामीले ल्याएका चीजहरू धेरै हदसम्म दूषित हुन्छन् र यस्ता सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् जुन उनीहरूको पेटमा जम्मा हुन्छन् भने गम्भीर रोगहरूको कारण गर्दछन्।
त्यसोभए, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि आफ्नो शरीरलाई विषाक्त पदार्थहरू स्वाभाविक रूपमा फ्लस गर्न मद्दत गरेर सफा पेट पाउनु पर्छ।
यदि तपाइँ सफा पेट प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ र तपाइँ घर उपचारको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको पेट र आन्द्राको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न सक्छ, तब तपाइँ प्राकृतिक तरिकाले जान सक्नुहुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ फ्याक्सको दाना र लसुन एकदम स्वस्थ छ र पेट विषलाई प्राकृतिक रूपमा फ्लस गर्न मद्दत गर्दछ?
ठिक छ, कसरी सफा पेटको लागि घरेलु उपचार बनाउने, र कसरी पेटमा स to्करित विषहरू फ्लश गर्ने सिक्नुहोस्।
पेट डिटोक्स बनाउने विधि
गर्भावस्थामा खानको लागि फलहरूको सूची
फ्लेक्स बीउ - २ चम्मच
लसुन - २- pe खुली लौंग
यदि तपाईं सफा पेट पाउनको लागि घरेलु उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ भने, जसले तपाईंको पेटको स्वाभाविक रूपले स्वास्थ्यको पनि सुधार गर्न सक्दछ, तब यो फ्ल्याक्स बीज र लसुन उपचार एकदम स्वस्थ र प्रभावकारी हुन सक्छ।
यस घरेलु उपचारमा तपाईलाई आंत्राको भित्तामा जम्मा हुने विषलाई बाहिर निकालਕੇ सफा र स्वस्थ पेट दिन सक्ने क्षमता छ!
म कसरी स्थायी रूपमा निष्पक्ष हुन सक्छु
थप रूपमा, स्वस्थ पेटको लागि यो घरेलु उपचारले तपाईंको आंतहरूमा रहेको जीवाणु र ब्याक्टेरियालाई पनि मार्दछ, जसले गर्दा तपाईलाई पेट सफा र विषाक्त रहित रहन्छ।
फ्ल्याक्स बीउ र लसुनको संयोजनमा उपस्थित विभिन्न भिटामिन र खनिजहरूले पनि तपाईंको पेटको कोषहरूलाई पोषण दिन र स्वस्थ पाचन रसको उत्पादनमा मद्दत गर्दछ।
प्राकृतिक डिटोक्सलाई तयार गर्ने र उपभोग गर्ने विधि:
केही पानीको साथ, ब्लेंडरमा सुझाव दिइएका सामग्रीहरू थप्नुहोस्।
मिश्रण प्राप्त गर्न राम्रोसँग पीस्नुहोस्।
अब, स्पष्ट रस प्राप्त गर्न मिश्रण तनाव।
तपाईंको स्वास्थ्य पेय खपत को लागी तयार छ।
एक दिनमा एक पटक खाली पेटमा यसलाई पिउनुहोस्।
त्यसोभए, यदि तपाईं सफा पेट चाहानुहुन्छ भने, यो घरेलु उपचार प्रयास गर्नुहोस् जसले तपाईंको पेटलाई स्वस्थ राख्नको लागि काम गर्न सक्छ!
कपालको विकासको लागि एलोवेरा जुस
महको साथ चम्किला छालाका लागि घरेलु फेस प्याक
बिहान छाक पिउँदा हुने फाइदाहरू
कसरी minutes मिनेटमा छिटो ना nails्गो बढाउने
हनुमान कुन भगवानको अवतार हो?